Inkcubeko yezopolitiko yimiba ekwabelwana ngayo iimbono, izimo zengqondo, iinkqubo, kunye nezigwebo zokuziphatha ezibangela ukuziphatha kwabantu kwezopolitiko, kunye nendlela abahambelana ngayo noorhulumente wabo kunye nomnye. Ngokwenene, iinkalo ezahlukeneyo zenkcubeko yezopolitiko zenza ukuba abantu baqonde ukuba ngubani na "akahlali".
Ngokwezinga elithile, urhulumente ngokwayo unokusebenzisa imizamo yokufikelela njengemfundo kunye nokukhunjulwa koluntu kweziganeko zembali yokubamba inkcubeko yezopolitiko kunye nembono kawonkewonke.
Xa kuthatyathwa ngokugqithiseleyo, iinzame ezinjalo zokulawula inkcubeko yezopolitiko zihlala ziphawu lwezenzo zeendlela eziqhelekileyo zohlobo lukaRhulumente .
Nangona bahlala bebonisa udidi olukhoyo lukaRhulumente ngokwalo, iinkcubeko zezopolitiko zibandakanya imbali kunye nezithethe zalo rhulumente. Ngokomzekelo, ngelixa i-Great Britain isenabo ubukumkani , ukumkanikazi okanye ukumkani akanalo amandla okwenene ngaphandle kokuvunyelwa kwePalamente ekhethwe ngentando yenkululeko. Nangona kunjalo, ngelixa ukuphelisa ubukhosi obukumkhosi buza kusindisa izigidi zikarhulumente ngezigidigidi ngonyaka, abantu baseBrithani, abaqhenyayo ngesithethe sabo seminyaka engaphezu kwe-1,200 yokulawulwa kobukhosi, abayi kuze kubekho. Namhlanje, njengoko kunjalo, ummi waseBrithani "olungileyo" uyamhlonela iNkundla.
Nangona iinkcubeko zezopolitiko zihluka ngokubanzi ukusuka kwisizwe ukuya kwisizwe, uhulumeni ukuba athi, kwaye nakwiindawo eziya kummandla, bahlala behlala bezinzile ngokuhamba kwesikhathi.
Inkcubeko yezobupolitika kunye nobuNtu boBomi
Kwinqanaba elikhulu, inkcubeko yezopolitiko ibonisa iimpawu neempawu ezenza abantu abemi abalungileyo. Kwiimeko zenkcubeko yezopolitiko, iimpawu 'zokuba ngabemi bobuhle' zigqithisa iimfuno zomthetho ezisisiseko zikaRhulumente zokufumana ubume bobuhlali.
Njengofilosofi ongumGrike u- Aristotle egxeka ekuphatheni kwakhe uPolitiki, ukuhlala nje kwisizwe akusenzi umntu ukuba abe ngummi waloo hlanga. U-Aristotle, ubemi beemfuno eziyimfuneko kuyimfuneko yokuthatha inxaxheba. Njengoko sibona namhlanje, amawaka abantu abahlala ngokusemthethweni abahlali kunye nabafudukayo bahlala eUnited States "njengabemi abalungileyo" njengoko kuchazwe yinkcubeko yezopolitiko ngaphandle kokuba babe ngabemi abemi ngokugcwele.
Iimpawu zabahlali abalungileyo
Abemi abalungileyo, ebomini babo bemihla ngemihla, babonisa ezininzi iimpawu ezibalulekileyo ezibalulekileyo kwiinkcubeko zobupolitika. Umntu ohlala ebomini obomnye kodwa engazange asebenze ukuxhasa okanye ukuphucula uluntu ngokuthatha inxaxheba ebomini ebomini unokubhekwa njengomntu olungileyo kodwa kungekhona ummi ontle.
E-United States, uluntu olungileyo kulindeleke ukuba wenze okungenani ezinye zezi zinto:
Thatha inxaxheba kwintando yesininzi ngokumelela ukuvota nokuvota okhethweni .
Sisebenzela iofisi ekhethiweyo okanye iivolontiya ukukhonza kwiibhodi ezilawulayo ezikhethiweyo.
Yithobela yonke imithetho yaseburhulumenteni , karhulumente kunye nemimandla yasekhaya.
Bonisa kwi-jury umsebenzi xa ubizwa.
Yiba nolwazi olusisiseko senkululeko, amalungelo kunye noxanduva oluqulethwe kuMgaqo-siseko wase-US.
Ukuhlawula zonke iintlawulo eziphathekayo, zombuso kunye neerhafu zendawo.
Hlalani nolwazi malunga nemiba yezopolitiko kunye nomgaqo-karhulumente.
Ivolontiya yokuthatha inxaxheba kwinkqubo yokuphucula umphakathi.
Thatha inxaxheba kwimikhosi yobuzwe kunye nezithethe, njengokumisela iNdumiso kaZwelonke kunye nokwazi iSithembiso sokuBamkela .
Ngaphandle kweUnited States, imbono yenkcubeko yezopolitiko - ngoko kubemi bemihlali - ingahluka ukusuka kummandla ukuya kummandla. Ngenxa yoko, kubalulekile ukuba ugweme ngokuxhomekeka kwiimpawu ezichasayo xa ugweba umgangatho wobuntu wobummi. Ngokomzekelo, abantu abakwindawo enye banokubaluleka ngakumbi ekugcinweni ngokukodwa kwezithethe zobuzwe kunabo bezinye iindawo.
I nkcubeko yezopolitiko inokutshintsha
Nangona ngokuqhelekileyo kuthatha izizukulwana ukuba zenzeke, iingqondo - kunye nenkcubeko yezopolitiko - zingatshintsha. Umzekelo:
Ukususela kwixesha lalo lenkoloni , iMelika ibone amaxesha apho inkcubeko yezobupolitika inokubaluleka ngayo umgaqo-nkqubo wokuzibandakanya kwimicimbi yangaphandle, ngakumbi kwimfazwe yangaphandle. Kwimeko nganye yeziganeko, iintsongelo zeemfazwe zasemzini zingasongela ubomi be-America kunye nenkululeko ngokukhawuleza kwaphumela ekutshintsheni ngokukhawuleza kwenkcubeko yezopolitiko.
Njengengxenye kaMongameli uLyndon Johnson wokutshatyalaliswa kweqhinga lokuhlaziywa kweNtlalo yeNkulu , iCongress yamisela uMthetho woLungelo lokuVota ka-1965 . Ukudlulela emva kwezizukulwana zokuchasana ngokobuhlanga ngokobuhlanga, umthetho ugunyazisile ukusetyenziswa kwemibutho yamanyeneyo ukulawula ukhetho kwiindawo ezininzi zaseMzantsi ukwenzela ukukhusela amalungelo okuvota kwabamnyama baseMelika. Kwiminyaka engamashumi amane kamva, besoyika ukuba inkcubeko yezopolitiko ejongene nobuhlanga eMzantsi ingasongela inkululeko yezopolitiko yabamnyama, iCongress noMongameli uGeorge W. Bush benza uMthetho wokuLungiswa kwamaLungelo okuVota ka-2006. zikhona kulo lonke uhlanga kunye nabaMnyama-baseMelika bavame ukunyulwa kwiofisi zombuso, karhulumente nakwii-ofisi.
Nangona ezinye iinkcubeko zezombusazwe zinokutshintshwa ngendinyana yemithetho, abanye abakwazi. Ngokuqhelekileyo, iinkalo zenkcubeko yezopolitiko ezisekelwe kwiinkolelo okanye iinkcubeko ezinzulu, ezifana nokuthanda izwe, inkolo, okanye ubuzwe banqabile kakhulu ukutshintsha kunezo ezisekelwe kwimigaqo-nkqubo kaRhulumente.
Inkcubeko yezobupolitika kunye neSizwe sakhiwo sase-US
Nangona kuhlale kunzima kwaye ngamanye amaxesha kunobungozi, oorhulumente bazama ukuphazamisa inkcubeko yezopolitiko zezinye iintlanga.
Ngokomzekelo, iUnited States iyaziwa ngokuba yinkqubo yenkqubo yomgaqo-nkqubo welizwe langaphandle ebizwa ngokuthi "ukwakhiwa kwesizwe" - iinzame zokuguqula oorhulumente bamazwe angaphandle kwiidemokhrasi zentando yaseMerika, ngokuqhelekileyo ngokusebenzisa ukusetyenziswa kwemikhosi.
Ngo-Oktobha 2000, uMongameli uGeorge W. Bush waphuma ngokumelene nokwakhiwa kwesizwe, esithi, "Andicingi ukuba imikhosi yethu ifanele isetyenziswe kwizinto ezibizwa ngokuba zakhiwo zentlanga. Ndicinga ukuba imikhosi yethu kufuneka isetyenziswe ukulwa kwaye iphumelele imfazwe. "Kodwa emva kweenyanga ezili-11, uSeptemba 11, 2001 ukuhlaselwa kwesibindi kwatshintsha umongameli.
Njengokugqithisa kweemfazwe e-Afghanistan nase-Iraq, i-United States iye yazama ukumisa iidemokhrasi kwizo ntlanga. Nangona kunjalo, iinkcubeko zezopolitiko ziye zavimbela loo mizamo yokwakha isizwe sase-US. Kwamazwe omabini, iminyaka yokujonga izinto ezinxulumene nezinye iintlanga, iinkolo, abafazi kunye namalungelo abantu obunjwe yiminyaka yolawulo lokunyanzeliswa ziqhubeka nokuma endleleni.
Indlela amaVotes abalwa ngayo kwiSuku loNyulo
Uhlobo Luni Lwe-Libertarian Ngaba Wena?
Amabutho amaninzi amatsha yeMfazwe Yehlabathi II
Top Robert Palmer Iingoma zee-80s
Amehlo Aphezu Kwinqanaba: Kutheni amaGolf Golf athile amaxesha athile ngaphandle kokujonga iBhola
Ukubhukuda ngokukhawuleza nge-Streamlines
Abadlali kwi-60 Seconds: Berthe Morisot
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Phatha" ngesiTaliyane
Ukubhala iiEmail kunye neencwadi
Saturn kwiNdlu yesihlanu